Yaaliin perezidaantii Gaambiyaa Yahyaa Jameeh fonqolchuuf godhame fashale - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Yaaliin perezidaantii Gaambiyaa Yahyaa Jameeh fonqolchuuf godhame fashale
Yaaliin perezidaantii Gaambiyaa Yahyaa Jameeh fonqolchuuf godhame fashale
Yaaliin perezidaantii Gaambiyaa, Yahyaa Jameeh umriin 49, angoo irraa fonqolchuuf godhame fashale. Yaaliin fonqolchaa kan qindaayeefi geggeeffame namoota dhalootaan Gaambiyaa irraa ta’an garuu biyyoota Ameerikaafi Awrooppaa keessa jirataniin ture. Namoonni yaalii fonqolchaa kana geggeessan meeshaa addaddaa biyyoota alaa irraa gara Gaambiyaatti dhoksaan kan galchan.
Kanniin yaalii fonqolchaa kana geeggeessan keessaa Chernoo Niji’eefi Papa Faal keessatti argamu. Lameenuu dhalootaan Gaambiyaa, garuu lammii Ameerikaati. Chernoo Niji’ee abaa qabeenyaa Teksaas jiraatu yoo ta’u Papa Faal jiraataa Minisotaafi nama woraana Ameerikaa kessaatti tajaajilaa tureedha. Chernoon mataa garee fonqolchaa kanaa ta’uu isaatu himama. Deeggarsa horiitiinis namoota yaalii fonqolchaa taasisan kanniin bira kan dhaabate isa jedhama.
Yaaliin fonqolchaa kan fashale gareen kuni humna woraana mootummaa masaraa eegaa tureen caalamuufi meeshaa gurguddaan rukutaamuun waan isaan mudateef. Kanniin yaalii fonqolchaa geggeessan keessaa kan du’an jiru. Papa Faaliifi kanniin biroo miliqanii gara Senegaalitti dheessan. San booda gara Ameerikaatti deebi’uu danda’aniiru.
Namoonni yaalii fonqolchaa taasisan kayyoofi hawwii dimokraasii gara Gaambiyaatti fiduu jedhu akka qaban dubbataniiru. Bara 2006 yaaliin fonqolchaa bifuma wolfakkaatuun Yahyaa Jameeh irratti geggeefame osoo firii hinargamsiisin hafuun niyaadatama.
Yahyaa Jameeh erga bara 1994 fonqolchaan angoo qabatee kaasee isa kan Gaambiyaa bulchaa jiru.
Previous articleUmmanni Mursii lafa isaa irraa buqqa’aa jiraachuun gabaafame
Next articlePaaris keessatti namoonni 12 ajjeefamanii, 11 madoo taasifaman